အခုပဲ သင့် ရဲ့ လက်သည်းလေးကို ကြည့်လိုက်ပါ… ဒီ အဖြူရောင် လခြမ်းပုံလေးတွေ ရှိမနေဘူးဆိုရင်တော့ - Tameelay
အခုပဲ သင့် ရဲ့ လက်သည်းလေးကို ကြည့်လိုက်ပါ… ဒီ အဖြူရောင် လခြမ်းပုံလေးတွေ ရှိမနေဘူးဆိုရင်တော့
သင့်ရဲ့လက်သည်းခွံတွေပေါ်မှာ Lunula လို့ခေါ်တဲ့ အဖြူရောင်လခြမ်းပုံလေးတွေရှိမနေဘူးဆိုလျှင် ဆရာဝန်ထံ အမြန်ဆုံးသွားရောက်ပြသပါ!
1. လက်မရဲ့လက်သည်းခွံပေါ်မှာ Lunula ရှိမနေဘူးဆိုလျှင်၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါအချို့ရဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
2. လက်ညှိုးရဲ့ လက်သည်းခွံပေါ်မှာ Lunula ရဲ့ အရွယ်အစားသေးနေလျှင် / လုံးဝမရှိလျှင် အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြသနာတွေကို ညွှန်ပြခြင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
3. လက်ခလယ် လက်သည်းခွံပေါ်က Lunula ရဲ့အရွယ်အစားကျုံ့သွားလျှင်၊ သွေးဖိအားနှင့်ပတ်သတ်တဲ့ ပြသနာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
4. လက်သူကြွယ် လက်သည်းခွံပေါ်မှာ Lunula မရှိလျှင် / အရွယ်အစားလျော့နည်းနေလျှင်၊ သိုင်းရွိက်ဂလင်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ပြသနာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
5. လက်သန်း လက်သည်းခွံပေါ်မှာ Lunula မရှိလျှင် အူ၊ ပန်ကရိယနဲ့ အသည်းတို့မှာပြသနာရှိနိုင်ပြီး၊ အမျိုးသမီးတွေမှာ မျိုးဆက်ပွားစနစ်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ပြသနာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Credit: Su Tanda
သငျ့ရဲ့လကျသညျးခှံတှပေျေါမှာ Lunula လို့ချေါတဲ့
အဖွူရောငျလခွမျးပုံလေးတှရှေိမနဘေူးဆိုလြှငျ ဆရာဝနျထံ အမွနျဆုံးသှားရောကျပွသပါ!
1. လကျမရဲ့လကျသညျးခှံပျေါမှာ Lunula ရှိမနဘေူးဆိုလြှငျ၊
2. လကျညှိုးရဲ့ လကျသညျးခှံပျေါမှာ Lunula ရဲ့ အရှယျအစားသေးနလြှေငျ / လုံးဝမရှိလြှငျ အူလမျးကွောငျးဆိုငျရာပွသနာတှကေို ညှနျပွခွငျးတဈခုဖွဈနိုငျပါတယျ။
3. လကျခလယျ လကျသညျးခှံပျေါက Lunula ရဲ့အရှယျအစားကြုံ့သှားလြှငျ၊ သှေးဖိအားနှငျ့ပတျသတျတဲ့ ပွသနာတှေ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
4. လကျသူကွှယျ လကျသညျးခှံပျေါမှာ Lunula မရှိလြှငျ / အရှယျအစားလြော့နညျးနလြှေငျ၊ သိုငျးရှိကျဂလငျးနဲ့ပတျသတျတဲ့ ပွသနာတှဖွေဈနိုငျပါတယျ။
5. လကျသနျး လကျသညျးခှံပျေါမှာ Lunula မရှိလြှငျ အူ၊ ပနျကရိယနဲ့
အသညျးတို့မှာ ပွသနာရှိနိုငျပွီး၊ အမြိုးသမီးတှမှော မြိုးဆကျပှားစနဈနဲ့ပတျသတျတဲ့ ပွသနာတှဖွေဈနိုငျပါတယျ။
သေရေးရှင်ရေး ကြုံနေရတာတောင် စည်းကမ်းရှိနေကြဆဲဖြစ်တဲ့ ကျွန်းနိုင်ငံငယ်လေး
ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ဟိုခိုင်းဒိုးပြည်နယ်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလ (၆) ရက်နေ့က ရစ်ချတာစကေး (၆.၇) ရှိတဲ့ အင်အားပြင်းငလျှင်တစ်ခု လှုတ်ခတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ လူအယောက် (၃၀၀) ကျော်ဒဏ်ရာရရှိကာ (၉) ယောက်ထက်မနည်း သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ အာဏာပိုင်တွေကတော့ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ (၂၉) ယောက်ကို ရှာဖွေနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အင်အားကြီးငလျင်ကြောင့်ပဲ တချို့နေရာတွေမှာ သောက်သုံးရေပြတ်လပ်နေရပြီး …